macOS အတွက် TestFlight ကို Mac App Store | တွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော်က mac ကပါ။
macOS အတွက် TestFlight ကို ယခု Mac App Store တွင် ရနိုင်ပါသည်။
ငါတို့သယ်တယ် နှစ်ပေါင်းများစွာiOS တွင်ရရှိနိုင်သော TestFlight ပလပ်ဖောင်းကို Mac အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ပတ်သက်ပြီးလများမဟုတ်ပါ။ macOS အတွက် TestFlight ၏တရားဝင်အတည်ပြုချက် WWDC 2021 တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။. ထိုအချိန်မှစ၍ Apple သည် ဤအပလီကေးရှင်း၏ မတူညီသော betas ကို စတင်ခဲ့ပြီး နာရီအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ၎င်းကို Mac App Store တွင် ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။
TestFlight ဖြင့်၊ အသုံးပြုသူများသည် အကောင့်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ iOS၊ watchOS၊ tvOS အတွက် အပလီကေးရှင်းများ၏ beta ဗားရှင်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး တပ်ဆင်ပါနှင့် ယခု macOS အတွက်လည်း ဖြစ်သည်။. ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများသည် အပလီကေးရှင်းတစ်ခုလျှင် beta စမ်းသပ်သူ 10.000 အထိ ဖိတ်ကြားနိုင်ပြီး မတူညီသောတည်ဆောက်မှုများကို တစ်ပြိုင်နက်စမ်းသပ်ရန် အဖွဲ့များဖန်တီးနိုင်မှုကို ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
အပလီကေးရှင်း၏ ဖော်ပြချက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်နိုင်သည်-
TestFlight ဖြင့်၊ ၎င်းသည် macOS အက်ပ်များ၏ beta ဗားရှင်းများကို စမ်းသပ်ရန် လွယ်ကူပြီး ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများအား ၎င်းတို့၏အက်ပ်များကို App Store တွင် မထုတ်ဝေမီ တန်ဖိုးရှိသော တုံ့ပြန်ချက်ပေးနိုင်သည်။ စမ်းသပ်သူများသည် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် အများသူငှာ လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် developer များထံမှ ဖိတ်ကြားချက်များကို လက်ခံရရှိပါသည်။
အက်ပ်တစ်ခုကို စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲတွင် စမ်းသပ်သောအခါ၊ Apple သည် သင်ပေးဆောင်သည့် ချွတ်ယွင်းချက်အစီရင်ခံစာများ၊ အသုံးပြုမှုအချက်အလက်နှင့် တုံ့ပြန်ချက်တို့ကို စုဆောင်းပြီး ၎င်းတို့ကို ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာထံ ပေးပို့သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာသည် ၎င်းတို့၏အက်ပ်နှင့် ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များကို မြှင့်တင်ရန် ဤအချက်အလက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ဖန် Apple သည် ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အမှားအယွင်းအစီရင်ခံစာများနှင့် အသုံးပြုမှုအချက်အလက်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထည့်သွင်းနည်း၊ စမ်းသပ်ရန်နှင့် တုံ့ပြန်ချက်ပေးသည့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် သင့်ဒေတာကို မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် testflight.apple.com တွင် ကြည့်ပါ။
TestFlight ၏ Apple ၏ developer platform တွင် ပေါင်းစည်းမှုကို ပထမဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သြဂုတ်လရဲ့အဆုံးမှာသို့သော်လည်း ၂ လကျော်ကြာသည်အထိ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသေးသည်။ ပလက်ဖောင်းက သွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
TestFligt ကို သင့်အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ အောက်ပါ link ကိုတဆင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » macOS အတွက် TestFlight ကို ယခု Mac App Store တွင် ရနိုင်ပါသည်။
Apple TV+ သည် ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Meadowlark Media နှင့် သဘောတူညီချက်အသစ်တစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။